ज्योती मगरलाई खुलापत्र ~ FMS News Info
ज्योती मगरलाई खुलापत्र
साच्चि तपाईको निकै चर्चा हुने गर्छ । नाम पनि निकै सुनिन्छ । साथीभाईसँग बस्दा होस् या त कही कतै चिया पसल यात सार्वजनिक स्थल तपाईकै कुरा हुनछ आजभोली ।
हुन त पहिले पनि आक्कलझुक्कल हुन्थ्यो तर आजभोली अलि बढी भइरहेको जस्तो लाग्छ मलाई । कुरा त हुन्छ तर, राम्रा कुरा भने कहिल्यै हुँदैन । आज म तिमीलाई तपाईकै बारेमा केही कुरा भन्न गइरहेको छु ।
ज्योती, ब्यक्तिगत रुपमा तिमीलाई जे मन लाग्छ गर, त्यो तिम्रो स्वतन्त्रता र अधिकार हो । तर, यसामाजिक रुपमा आफ्नो उत्तउलोपन आफैसँग राख्दा राम्रो होला । तिमीले केही समय यता लोकगीत दोहोरी गीत क्षेत्रको नराम्रोसँग बेइज्जत गरिरहेकी छौँ । धेरै पटक तिम्रा उत्ताउला र सीमा नाघेका गीत भिडियो सुनेपछि हेरेपछि मन अमिलो भएर आउँछ । केही दिनदेखि उनको बारेमा अनलाइनहरु फेसबुक र ट्विटर अनी यु ट्युबमा आइरहेका प्रतिकृया हेरेपछि मेरो मन थाम्न सकेन र केही कुरा लेख्न मन लाग्यो ।
मलाई लाग्छ लोक गीत र दोहोरी गीत, तीज गीत भनेको हरेक नेपालीको मन हो, मुटु हो । जसको सम्बन्ध हाम्रो पूर्खासँग पनि रहेको छ र नेपाली संस्कृतिको एउटा रुप पनि यही हो । ज्योति तिमी यो क्षेत्रको लागि अनुपयुक्त छौ ? तिमी आफैलाई सोध । यो पवित्र क्षेत्रलाई तिम्रो नग्नता र उत्ताउलोपनले दुषित पार्ने धृष्टता नगर । चर्चा कमाउनकै लागि हो भने, देखाएकै भरमा हिट हुने भूत चढेको हो भने, तिमीलाई अरु बाटो रोज, मोडलिङमा जाउ तर नेपाली लोक क्षेत्रमा बसेर यस्तो तमासा नगर । लोक क्षेत्रमा आएर शरीर देखाउने काम नगर र लोक गितको जुन पुरानो पहिचान छ त्यसलाई बिगार्न नखोज । यस्ता गतिबिधि गर्ने अरु बाटा छन् त्यतै जाऊ तिमी ।
हेर, लोक दोहोरी क्षेत्र ज्योतीको ‘देखाउने’ क्षेत्र होइन । ज्योति तिमी लोक दोहोरीको नाम लिएर यसलाई बिटुल्याउने काम नगर । तिम्रा बाबुआमा दाजुभार्इ दिदी बहिनी वा कोही आफन्तजन सँगसँगै बस, तिम्रै उत्ताउलोपना हेर, देखाउm अनी वहाँहरुलाई सोध, तिम्रो अन्तरमनलाई सोध, के तिमी ठीक गर्दैछौं ? तिम्रो काम, क्षेत्र र तिम्रो व्यवहार फरक भयो । एकपटक सोच अनि आफ्नो नाम गलत पहिचान र बाटोबाट होइन राम्रो बटोबाट कमाऊ ।